Sida loo isticmaalo nooca ugu dambeeya ee Choqok ee ArchLinux | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo isticmaalo nooca ugu dambeeya ee Choqok ee ArchLinux
Sida ay dad badani ogyihiin, Twitter bedelay API-keedii iyo codsiyo badan ayaa saameyn ku yeeshay. Kuwa aan isticmaalno GNU / Linux, iyo wixii ka sarreeya KDE, Waan ognahay in macmiilka ugu fiican ee Microblog meesha ka jira la yiraahdo choqok, sababo badan oo aan hadda khuseynin, laakiin codsigan ayaa sidoo kale la kulmay nasiib-darrada isbeddelka API.
Wakhti aan fogayn Waan ka faallooday iyaga in aad u yar choqok Waxay ahayd inay ka dhamaato taageeradii, laakiin mahadsanid falsafada OpenSource, qof kale ayaa qaatay mashruuca mana dhiman doono, ugu yaraan hadda.
Nooca ugu dambeeyay ee choqok kaas oo lashaqeeya Twitter, wali kumajiro keydadka Archlinux, sidaa darteed waa inaan ka soo dejisanaa keydkeeda GIT oo aan soo ururinnaa. Si tan loo sameeyo waxaan sameyneynaa tan xigta:
Waxaan fureynaa terminal (waa inaan git ku rakibnaa Arch ama git-core Debian) waxaana dhignaa:
Ama maxaa isku mid ah:
Waxaan kaa sugeynaa inaad dhammeysato soo degsashada feylasha lama huraanka ah, oo ay ku jiraan README oo noo sheegaysa tillaabooyinka la raacayo, kuwaas oo ah kuwa soo socda:
$ cd choqok / $ mkdir dhis $ cd dhis / $ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX = `kde4-config --prefix` ..
Caadi ahaan, haysashada ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah tani way ku filnaan lahayd, laakiin waxay igu tuurtay qaladkan:
Waxaan ku sigtay inaan tuuro tuwaalka laakiin barxadaha Arch waxaa lagula taliyay inaan isticmaalo PKGBUILD, feyl dhismo sharraxaad ah oo xirmo ah qaybintaan ah.
Marka wixii aan sameeyay waxay ahayd marin u helid https://aur.archlinux.org/packages/choqok-git/ oo soo dejiso tarball leh faylasha loo baahan yahay. Kubbadda tarball-ku waxay leedahay laba fayl oo gudaha ah: PKGBUILD y choqok-git.install, kuwaas oo loo isticmaalo makepkg si aad u buuxiso codsi oo si fudud loogu rakibi karo Pacman.
Hagaag, waan kala bixinaynaa tarball-ka waxaana geynaynaa saldhiga waxaan galnaa galka ay ku yaalliin labadan feylood. Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno waa:
Sixirkiina waa la qabtay. Dhowr daqiiqo ka dib (waxay kuxirantahay awooda qalabkayaga), feylka ayaa la abuuri doonaa choqok-git-20130619-1-x86_64.pkg.tar.xz, oo aan ku rakibi karno adigoo garaacaya:
Taasina waa ragga. Waxaan hadda ku raaxaysan karnaa markale Twitter iyada oo loo marayo choqok.
Actualizado: Sida isbarbardhiga Gregorio Espadas ii sheego, haddii aan rakibnay Yori kaliya waa inaan ordi:
Isticmaalayaasha Debian iyo kuwa soosaarayaasha ah ha ka welwelin, KZKG ^ Gaara ayaa ku tusi doona sida ugu dhakhsaha badan ee qaybtan loogu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo isticmaalo nooca ugu dambeeya ee Choqok ee ArchLinux
oo diyaar! 😉
Waad salaaman tihiin Gespadas.
Maxaa ku dhacay balooggaaga? Muddo dheer waxba kamaad daabicin.
Ma u hurtay naftaada mashruuc kale?
Waxaan sugayaa qaalikeyga qaaliga ah ee Turpial-kiisa cusub ee 1.0 oo leh taageerida tweet-ka cusub api… ..
Waa inaysan qaadan waqti dheer maadaama libturpial 1.0 uu diyaar yahay.
Qof walba isaga ayuu sugayaa 🙂
Markii aan ka tago Choqok, waxaan aadaa Hotot, laakiin waxaan u socdaa Turpial? Mar dambe U_U
1.0-ka Turpial-ka waxay noqoneysaa repanocha !!! 😛
Hadaad sidaa tiraahdo ... Miyaad leedahay akoonno badan? Ma leedahay nooc loogu talagalay Qt?
Ubuntu 12.04 waxaan kusii helayaa qalad markii aan isku dayayo inaan diro xD Xitaa Xayeysiisyadayda aan sheegayo lama cusbooneysiiyo, Hoyga iyo wixii la mid ah.
Yaourt la'aan, waxaad isticmaali kartaa amarka 'makepkg -si' halkaas oo aad kala soo bixi karto waxyaabaha aad ku tiirsan tahay oo aad ku rakibi karto xirmada
Tusmada ugu hooseysa ee JRB dijo
Waxaan isticmaalaa Polly oo si aad u wanaagsan ayey u shaqaysaa, aad u fudud oo aan dhibaato lahayn. Waxay ka helaan AUR.
Jawaab Max JRB
Waa maxay warka wanaagsan, qof faraxsan oo awooday inuu qaato mashruuca, wali waxaan sugayaa Hotot iyo / ama Turpial.
PS waxay soo saartaa bidciga maskaxda ku xeel dheer 😛
Gawaarida Gawaarida dijo
Waa inay hubiyaan Birdie: 3
Ku jawaab Squawk
Waxaan rajeynayaa in Hotot Stable uu isna soo bixi doono. Waan ku xanuunsanahay inaan galo Twitter ama Identi.ca (maxaa yeelay waxay u wareegeen pump.io walina ma arki karo API-kooda).
Ku rakib Intel, ATI iyo Nvidia Video Drivers Arch Linux
Diiwaanka Rakibaadda Slackware: Wax walba maahan waxa ay u muuqdaan